Aịzaya 41 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Onye si ebe ọwụwa anyanwụ nke na-emeri mba dị iche iche (1-7)
Chineke họọrọ Izrel ka ọ bụrụ ohu ya (8-20)
‘Ebreham bụ enyi m’ (8)
Chineke gwara arụsị dị iche iche ka ha zara ọnụ ha (21-29)
41 “Ndị bi n’agwaetiti, nọrọnụ jii gee m ntị.* Mba dị iche iche, nwetaghachinụ ike. Bịanụ m nso kwuo okwu.+ Ka anyị nọrọ ihu na ihu ka m kpee unu ikpe. 2 Ònye nyere onye si ebe ọwụwa anyanwụ ike?+ Ònye kpọrọ ya ka ọ bịa kpee ikpe ziri ezi,Ka e nyefee mba dị iche iche n’aka ya,Meekwa ka o merie ndị eze dị iche iche?+ Ònye ji mma agha ya gbuo ha, ha aghọọ uzuzu? Ònye jikwa ụta ya gbajasịa ha, ha adị ka ahịhịa ọka nke ifufe na-ebugharị? 3 Ọ na-achụ ha ọsọ. Ọ na-eji ụkwụ si ụzọ ọ na-agatụbeghị mbụ chụọ ha ọsọ. E nweghịkwa ihe na-anọchiri ya ụzọ. 4 Olee onye na-arụ ọrụ kemgbe nke mere ihe a? Oleekwa onye mere ka ọgbọ dị iche iche dịrị kemgbe ụwa? “Mụnwa, bụ́ Jehova, bụ Onye Mbụ.+ M ga-abụkwa otu onye ahụ ruo mgbe ọgbọ ikpeazụ ga-aga.”+ 5 Ndị bi n’agwaetiti dị iche iche hụrụ ihe na-eme, tụwa ụjọ. Ndị bi ná nsọtụ niile nke ụwa malitere ịma jijiji. Ha gbakọrọ ma na-abịa nso. 6 Onye ọ bụla na-enyere ibe ya aka,Otu onye ana-asịkwa nwanne ya: “Dị ike.” 7 Omenkà na-agba onye na-eji ígwè akpụ ihe ume.+ Onye na-eji hama e ji akpụ ụ́zụ́ akụsa ígwèNa-agba onye ọzọ na-akụkọta ígwè na ígwè ume. Ọ na-asị na otú e si kụkọta ígwè ndị ahụ dị mma. N’ikpeazụ, mmadụ na-eji ntu kụgide arụsị ahụ n’ihe ka ọ ghara ite kweke kweke. 8 “Ma Izrel, ị bụ ohu m.+ Jekọb, ọ bụ gị ka m họọrọ.+ Ị bụ nwa* Ebreham bụ́ enyi m.+ 9 Esi m n’ebe ụwa sọtụrụ kpọrọ gị.+ Esi m n’ebe kacha anya n’ụwa kpọrọ gị. M sịrị gị, ‘Ị bụ ohu m.+ Ahọrọla m gị. Ajụghị m gị ajụ.+ 10 Atụla egwu, n’ihi na m nọnyeere gị.+ Echegbula onwe gị, n’ihi na abụ m Chineke gị.+ M ga-eme ka ị dị ike. M ga-enyekwara gị aka.+ M ga-eji aka nri m, bụ́ aka m ji eme ihe ziri ezi, jidesie gị ike.’ 11 Ihere ga-eme ndị niile na-ewesa gị iwe. A ga-emechukwa ha ihu.+ M ga-ala ndị na-alụso gị agha n’iyi. Ha agaghịzi adị.+ 12 Ị ga-achọ ndị na-alụso gị agha, ma ị gaghị ahụ ha. Ndị na-alụso gị agha ga-adị ka ihe na-adịghị adị na ihe efu.+ 13 N’ihi na mụnwa, bụ́ Jehova Chineke gị, sekpụ gị n’aka nri gị. Ọ bụ m na-asị gị, ‘Atụla egwu. M ga-enyere gị aka.’”+ 14 Jehova, Onye Mgbapụta gị,+ bụ́ Onye Nsọ Izrel, sịrị, “Gịnwa bụ́ Jekọb, onye dị ka idide e kwesịrị imetere ebere, atụla egwu,+Ndị Izrel, m ga-enyere unu aka. 15 Emeela m ka unu bụrụ ihe e ji eticha ọka,+Ya bụ, ngwá ọrụ ọhụrụ nke nwere ezé n’akụkụ ya abụọ, nke e ji eticha ọka. Unu ga-azọda ugwu ukwu dị iche iche, zọriekwa ha. Unu ga-emekwa ka ugwu nta dị iche iche dị ka mkpo ọka. 16 Unu ga-afụcha ha. Ifufe ga-ebufukwa ha. Oké ifufe ga-efesasị ha. Unu ga-aṅụrị ọṅụ n’ihi Jehova.+ Unu ga-ejikwa Onye Nsọ Izrel na-eme ọnụ.”+ 17 “Ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha na ndị ogbenye na-achọ mmiri, ma mmiri adịghị. Mmiri agụkatala ha ire ha akpọọ nkụ.+ Mụnwa, bụ́ Jehova, ga-enyere ha aka.+ Mụnwa, bụ́ Chineke Izrel, agaghị ahapụ ha.+ 18 M ga-eme ka osimiri na-asọ n’elu ugwu ahịhịa na-adịghị,+Meekwa ka ndagwurugwu bụrụ ebe mmiri si agbapụta.+ M ga-eme ka ala ịkpa bụrụ ọdọ mmiri ahịhịa amị juru,Meekwa ka ala mmiri na-adịghị bụrụ isi iyi.+ 19 M ga-akụ osisi sida, osisi akeshịa,Osisi metụl, na osisi paịn n’ọzara.+ M ga-akụkwa osisi junipa na osisi ashNakwa osisi saịpres n’ọzara.+ 20 Ihe a ga-eme ka ndị mmadụ hụ, mata,Gee ntị ma ghọtaNa ọ bụ aka Jehova mere ihe a,Nakwa na ọ bụ Onye Nsọ Izrel mere ya.”+ 21 Jehova kwuru, sị, “Zaranụ ọnụ unu.” Eze na-achị Jekọb kwuru, sị, “Kwuonụ otú o si bụrụ na aka unu dị ọcha. 22 Arụsị dị iche iche, kọọrọnụ anyị ihe ndị gaje ime, kwuokwanụ otú unu si jide n’aka na ha ga-eme. Gwanụ anyị ihe ndị mere n’oge gara aga,*Ka anyị chebara ha echiche,* matakwa ihe mechara mee. Ma ọ bụ, gwanụ anyị ihe ndị na-aga ime.+ 23 Gwanụ anyị ihe ga-eme n’ọdịnihu,Ka anyị mara na unu bụ chi.+ Meenụ ihe ga-eju anyị anya ma anyị hụ ya,Ma ọ̀ bụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ.+ 24 Unu abaghị uru ọ bụla. O nweghị ihe ọ bụla unu na-arụpụta.+ Onye ọ bụla kpebiri ife unu rụrụ arụ.+ 25 Enyela m onye si n’ebe ugwu ike. Ọ ga-abịakwa.+ Onye a nke si n’ebe ọwụwa anyanwụ+ ga-eto aha m. Ọ ga-azọ ndị na-achị achị* ụkwụ ka à ga-asị na ha bụ ụrọ.+ Ọ ga-azọ ha ụkwụ otú ahụ ọkpụite si azọ ụrọ. 26 Ònye kwuru gbasara ihe a ná mmalite, ka anyị wee mara,Ma ọ bụ, ònye gwara anyị ya n’oge gara aga, ka anyị nwee ike ịsị, ‘O kwuru eziokwu’?+ N’eziokwu, o nweghị onye mara ọkwa ya. O nweghị onye kwusara ya. O nweghị onye nụrụ olu unu.”+ 27 Abụ m onye mbụ gwara Zayọn, sị: “Lekwa ihe na-aga ime.”+ E nwere onye m ga-agwa ka ọ gaa zie ozi ọma na Jeruselem.+ 28 M nọ na-ele anya, ma o nweghị onye m hụrụ. O nweghị onye ọ bụla n’ime ha na-enye ndụmọdụ. M nọ na-ajụ ha ajụjụ, ma ha azaghị m. 29 Ha niile abaghị uru ọ bụla.* O nweghị ihe ha ga-emeli. Arụsị ha a kpụrụ akpụ enweghị isi na ọdụ.+
^ Ma ọ bụ “nọrọnụ jii n’ihu m.”
^ Na Hibru, “ihe mbụ niile.”
^ Ma ọ bụ “Ka obi anyị dịrị na ha.”
^ Ma ọ bụ “ndị osote onye na-achị achị.”
^ Ma ọ bụ “adịghị adị.”